Hormuud News Wednesday, February 21st, 2018 | 22:22
[Sunday, February 4th, 18] :: Ciidamo Gadood san oo lagu arkay Kimaayo
Kismaayo (RH) Wararka naga soo gaaraya magaalada Kismaayo ee xarrunta gobalka Jubbada Hoose, ayaa sheegaya in magaalada laga dareemayo xiisad kaddib markii waddooyinka qaar la xiray laguna arkay ciidamo gadoodsan.
Dadka magaalada ayaa sheegay in xiisadda magaalada ay la xiriirto kadib markii dhawaan la xiray xidhibaan ka tirsan baarlamaanka Jubbaland Axmed Xasan Cabdi (Axmed Taajir).
Ciidamada gadoodsan ayaa ka xuran xarriga xildhibaanka, waxaana ay saaka fuuleen daba Fiat oo ku yaalla ka soo horjeedka xarrunta taliska ciidamada nabad sugidda Jubaland ee Kismaayo halkaas oo uu ku xiranayahay xildhibaanka.
Sidoo kale, ciidamada gadoodka ka sameeyay magaalada ayaa xannibay isku socodka qeybo ka mid ah magaalada, sida ay goobjoogayaal u sheegeen Soomaalikabe.
Xildhibaanka la xiray ayaa horrey waxaa xasaanada uga qaaday baarlamaanka, waxaana uu maamulka Jubaland ku eedeysay in uu yahay xildhibaa
Horrey, ayaa madaxweyne ku xigeenka Jubbaland, Maxamuud Sayid Aadan u sheegay in xildhibaanka uu ku been abuurtay xildhibaanno kale isagoo sheegaya in ay soo diyaariyeen mooshin ka dhan ah xukuumadda isla markanna uu magaalada ka abuuray amni darro sida uu yiri.
Mar la weydiiyey in arrimahaas ay ku lee yihiin madaxda maamulka Jubbaland waxa uu sheegay in cid kasta oo sharciga baal marta tallaabo laga qaadayo.
“Xildhibaanka waxa uu ku tuntay sharciga iyo xeerka baarlamaanka sidaas ayaa xasaanadda looga qaaday kaddibna uu been abuuray xildhibaanno kale oo ku sheegay in ay diyaariyeen mooshin” ayuu yiri Maxamuud Sayid.
Waa xildhibaankii saddexaad ee ka tirsan maamulka Jubbaland ee xasaanadda laga qaado guud ahaan waa meeshii ugu horreysay oo xildhibaan xasaanad looga qaado inta hadda la ogyahay Soomaaliya.
Si kataba, Dad badan oo la socda arrimaha siyaasadda, ayaa sheegaya in maamulka Jubbaland uu beegsado cid kasta oo ka hortimaada maamulkiisa oo xildhibaan isla markaanna guddoonka baarlamaanka uu noqday kuwa hoos-taga madaxda Jubbaland.